Xbox One တွင် Discord အသုံးပြုနည်း။ - ဂိမ်း
ယနေ့ခေတ် Discord သည်အစဉ်အလာ In-game mic setup ကိုအစားထိုးသည်။ သင်ဆာဗာများပူးပေါင်းနိုင်ခြင်း၊ တေးဂီတကိုနားထောင်ခြင်းနှင့်အချို့သောကောင်းသောမှတ်စုများကိုရယ်မောခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်နှင့်အမျှ Discord သည်ဂိမ်းကစားသူများအတွက်ပိုမိုသင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ သို့သော်နှစ်ပေါင်းများစွာ console ဂိမ်းကစားသူများသည်၎င်းတို့၏ system ပေါ်တွင် Discord ရရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာဖွေနေသည်။ ဒီ post မှာတော့ XBOX One မှာ Discord ဘယ်လို install ရမယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးမှာပါ။
စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းနှင့်အတူ Xbox One?
Discord သည်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်သင့်တော်သောနည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုသင်အသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ Xbox One အတွက်ဂိမ်းကစားခြင်းသည်အတော်လေးအထောက်အကူဖြစ်ပြီးသင်၏ Xbox တွင်“ အပို” နေရာမယူပါ။
ငါတို့ရှိသမျှသိသည်အတိုင်း, Xbox consoles စရုံဂိမ်းများအတွက်ရည်ရွယ်သည်; sideloading အားဖြင့်, Discord ကဲ့သို့သောကြီးမား application ကိုသင်၏ Xbox ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်လိမ့်မည်။ developer များကထိုကဲ့သို့သော third-party app ကိုခွင့်မပြုသည့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ပါတီစနစ်ကို Xbox မှပံ့ပိုးထားပြီး၎င်းသည်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်တွင်ပါသည့်အဆင့်များနှင့်သင်ကစားနေသောသီးသန့်သီးသန့်များအားလုံးကိုသူငယ်ချင်းများကိုအလွယ်တကူပြနိုင်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးပြproblemနာကို Xbox မူပိုင်ပါတီစနစ်ဖြင့်အလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးရေးသားချက် -သင်သိပါလား? Nintendo ပြောင်းလဲမည်2၂၀၂၁ အစောပိုင်းတွင်စတင်မည်
XBOX One တွင် Discord ကိုထည့်သွင်းရန်အဆင့်များ -
သင်၏ Xbox Live အကောင့်သို့ဆိုင်းအင်ဝင်ပါ။
ညာဘက်အခြမ်းတွင်ရှိသော system tab သို့သွားပါ။ အကောင့်ရွေးစရာသို့သွားပြီးချိတ်ဆက်ထားသောလူမှုရေးအကောင့်များကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်သည် Discord သင်္ကေတကိုသင်၏ညာဘက်အခြမ်းတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပြီးသွားနိုင်ပြီး link ကိုနှိပ်ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ပါနှင့်သင်၏ Microsoft အကောင့်ကို Discord နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
၎င်းသည်အရေးအပါဆုံးအဆင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂဏန်းခြောက်လုံးပါသည့်ကုဒ်ကိုဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပြလိမ့်မည်။ သင်၏ဖုန်း / ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ Discord အက်ပ်ကိုဖွင့ ်၍ ချိန်ညှိချက်များသို့သွားပါ။
စုဆောင်းမှုကိုသွားပါ၊ ထို့နောက် Xbox live သို့သွားပါ။ Discords ကသင့်အားခေါ်ဆောင်သွားသောမျက်နှာပြင်ရှိကုဒ်ကိုရိုက်ပါ။
ယခုဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ Xbox အကောင့်သည်သင်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီဖြစ်သည် မိုက်ကရိုဆော့ဖ်အကောင့် ။ သို့သော်သင်၏သူငယ်ချင်းများကသင်ကစားနေသည့်အရာကိုသာမြင်နိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းသည်လက်ရှိရရှိနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
1Q ။ Xbox One ကို Discord နှင့်မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်နည်း။
နှစ်များအတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သင်လွယ်ကူသောအဆင့်သုံးဆင့်ကိုဂရုပြုပြီးသင်၏ Microsoft အကောင့်သို့ ၀ င်ပါ။ Xbox အကောင့်ကို Console ရှိ Discord နှင့်ချိတ်ဆက်မှုအဆင့်ကိုစတင်ပါ၊ သင်၏ Mobile / Tablet / PC ရှိဂဏန်းခြောက်လုံးကုဒ်ကိုထည့်ပါ။ သင့်တွင်အဆင့်များ၏အကျဉ်းချုပ်ကိုဖော်ပြထားပြီးအမှားအယွင်းများမှရှောင်ရှားရန်ပို့စ်တစ်ခုလုံးကိုဖတ်ပါ။
2Q ။ ချိတ်ဆက်ရကျိုးနပ်လား?
သင်ကစားနေသည့်အရာကိုသင်၏သူငယ်ချင်းများကိုပြသခြင်းသည်သင်၏ ဦး စားပေးတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ သူတို့သည်သင်ကစားနေသည့်အရာကိုနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်းသင်နှင့်မဆက်သွယ်နိုင်ပါ။ ဆက်သွယ်ရေး၏တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ In-game mic ဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်သင်၏ Xbox အား Discord နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသည်အန္တရာယ်မရှိပါ။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၎င်းသည်အတော်အတန်ရိုးရှင်းပြီးသင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသာဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အကောင့်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းသည်သာအကျိုးရှိလိမ့်မည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်ကစားနေသောမည်သည့်ဂိမ်းကိုသင့်သူငယ်ချင်းများကိုပြချင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့စ်ကသင့်ကို Xbox မှာ Discord ဘယ်လို install ရမယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးထားတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည် Xbox တွင် Discord ကိုထည့်သွင်းရာ၌အောင်မြင်ခဲ့ပါက၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်အကွက်ထဲတွင်မှတ်ချက်အချို့ပေးပါ။
Xbox စီးရီး X ကို vs PS5
Xbox Live ကုဒ်များကိုဘယ်လိုရယူမလဲ။
2020 တွင်အကောင်းဆုံး CamScanner ရွေးချယ်စရာများ
ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဒုတိယ ၄ သန်းကိုလုပ်ခဲ့တယ်
android ပေါ်မှာ free robux ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ
အခမဲ့ xbox တိုက်ရိုက်လက်ဆောင်ကတ်များ